I-SPC iyila kunye nohlelo lwayo olunqunyelwe oluyilwe ngu-El Dios de los Tres | Iindaba zeGajethi
I-SPC iyaqhubeka nomnqweno wayo wolawulo lwentando yesininzi, inkampani ibhejile kumnyhadala wayo eMadrid ukuze yenze nakubani na. Siye sabona uyilo lwesandla sokuqala apho iimveliso ezintathu zakudala ze-SPC ngoku zikhangeleka ngcono kunangaphambili. I-strador igqithisela kwindalo iphela yoyilo kwizinto ezintathu ezintsha ze-SPC, ithebhulethi Izulu 10.1, uSomlomo weSpare kunye neSmartee Circle smartwatch.
Le ngqokelela intsha ivela kwi-SPC ngokusebenzisana no-El Dios De Los Tres iphefumlelwe ngohlobo isikolo esidala kwaye imizekeliso ibandakanya imibala eqaqambileyo kunye nomdlalo wokufuzisela.
UJavier Navarro, iAlmeria igcisa elizinze e-Barcelona ngasemva kwe-El Dios De Los Tres, imele imisebenzi yayo eyahlukeneyo kwaye ikwazile ukuzibeka njengomnye wabazobi abasebenzayo nabaguqukayo kwimeko yesizwe. Umsebenzi wakhe ngokwakhe uwuchaza njengoguquguqukayo kunye nophando, apho afumana khona iimpembelelo kwidolophu yakhe-eAlmería-, umculo awumamelayo okanye abantu angqonge bona. Ukusuka kwiimpembelelo ze ubugcisa besitalato, kwinzululwazi yendalo kunye neesimboli, umbhali ukwazile ukuba njenge-chameleonic ngangokunokwenzeka kumsebenzi wobuqu.
Ukuqala sinayo Izulu 10.1 ithebhulethi eyilwe ngu-El Dios De Los Tres iya kufumaneka ngomthamo we-16 GB, i-Quad Core Cortex A53 kwi-1.3 GHz, i-Dual Core Mali 4000MP2 yemizobo kunye ne-2 GB ye-RAM; kunye ne-5.000 mAh ibhetri ye-lithium kunye neempawu zakudala. Ukongeza kolu luhlu lilinganiselweyo zezi Somlomo weSigaba ineeyure ezisibhozo zokuzimela kunye nesandi esinamandla sombulelo kunxibelelwano lwayo lweBluetooth 4.1
I-smartwatch nayo iza kolu hlelo lilinganiselweyo Isangqa seSmartee Idibanisa ukusebenza, umbala, ubuchule kunye nobuntu kwinto efanayo yokunxiba. Olu lawulo lunxibekayo lomsebenzi womzimba kwaye lufumana zonke izaziso ezivela kwi-imeyile, usetyenziso lwemiyalezo kunye nenethiwekhi yoluntu, kunye nokukwazi ukulawula iifowuni ezingenayo.
Ixabiso elilinganiselweyo lohlelo kunye nokufumaneka
I-SPC Amazulu 10. 1 tablet iyafumaneka ngexabiso lama-euro angama-129.
USomlomo weSphere ovela kwi-SPC Iyafumaneka ngexabiso lama-euro angama-49,90.
I-smartwatch yesekethe yeSpee's Smartee Iyafumaneka ngexabiso lama-euro angama-99,90.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-SPC iyila kunye nohlelo lwayo olunqunyelweyo olwenziwe ngu-El Dios de los Tres
Iimfazwe zeNkanyezi: IJedi yokugqibela, uluvo lwethu kunye nembono ye "Luxury"